मेरो उम्मेद्वारी जग बसाल्ने अभियान हो - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
मेरो उम्मेद्वारी जग बसाल्ने अभियान हो
एचबी भण्डारी ‘ह्यारी’
संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अवसर देशको रुपमा समेत चित्रित गरिन्छ । विगतमा आप्रवासीको सवालमा उदार अमेरिकामा विश्वका अधिकांश देशका नागरिक भेटिन्छन् । स्थायी र अस्थायी रुपमा अमेरिकामा आई बसिरहेका विश्वका अन्य देशका जस्तै नेपालीको समेत यहाँ उपस्थिति बढिरहेको छ । अमेरिकामा नेपाली आउन थालेको धेरै वर्ष भएको छैन । जनसंख्याको हिसाबले समेत नेपालीको उपस्थिति समग्र आप्रवासीहरुबीच अधिक छैन । तथापि कुल अमेरिकाको जनसंख्याको न्यून प्रतिशत नेपालीको जनसंख्या यहाँ रहेको र यो छोटो अवधिमा पनि बिस्तारै नेपाली विभिन्न क्षेत्र, पेशा, व्यवसायमार्फत यहाँको मूलधारमा स्थापित हुने क्रममा रहेका छन् । अल्पसंख्यक सूचीमा पर्ने नेपाली अन्य क्षेत्रमा जस्तै यहाँको राजनीतिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय हुन थालेका छन् । यहाँको राजनीतिक दलमा सक्रिय हुनुका साथै स्थानीय निकायका विभिन्न पदमा अहिले नेपाली बिस्तारै प्रवेश गर्न थालेका छन् । यहाँको राजनीतिमा नेपालीको चासोसमेत बढ्न थालेको छ । यही अध्ययन सकाएको पुस्तासमेत तयार भइरहँदा यहींको मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत नेपाली समुदायमा बढेको छ । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका निर्वाचनहरुमा नेपालीहरुसमेत उम्मेदवार बन्ने क्रमसमेत बढेको छ ।
यसै क्रममा अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको हाउस अफ डेलिगेट्स (राज्य सांसद)मा बाल्टिमोर काउन्टीअन्तर्गत लेगिसलेटिभ डिष्ट्रिक्ट ८ बाट डेमोक्रेट पार्टीको तर्फबाट प्राथमिक चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् एचबी भण्डारी । आउँदो जुन १६ मा हुने प्राथमिक चुनावमा विजयी हुने पूर्ण विश्वासी रहेका भण्डारी त्यसपछि नोभेम्बर ६ मा रिपब्लिकनका अन्य उम्मेदवारसँग अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन् । नेपाल पर्वत जन्मघर भई सन् २००५ मा भर्जिनियास्थित जर्ज म्यासन युनिभर्सिटीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोताका रुपमा निम्त्याइएका उनले अमेरिकाकै अर्को विश्वविद्यालय जोन होपकिन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर सकेका छन् भने हाल युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्डबाट विद्यावारिधी गरिरहेका छन् । नेपालमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर उनी नेपालमा रहँदा प्राध्यापक पेशामा रहेका थिए । हाल उनी यहाँ पनि अध्यापन पेशामै जोडिएका छन् ।
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको स्टेट डेलिगेट्सको चुनावी यात्रामा अघि बढ्नुअघि उनले योङ डेमोक्रेट्स अफ अमेरिकाको राष्ट्रिय सचिव भएर काम गरिसकेका छन् भने बाल्टिमोर क्षेत्रका विभिन्न सरकारी निकायमा विभिन्न पदमा रही अनुभव बटुलेका छन् । उनले डिष्ट्रिक्ट ६ डेमोक्रेटिक क्लबको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, लिन ओभर कम्युनिटी एसोसिएसनको अध्यक्ष, बाल्टिमोर काउन्टी गभर्मेन्ट एड्भाइजरी बोर्ड मेम्बर, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ योङ डेमोक्रेट्स अफ बाल्टिमोर काउन्टी पदमा रहेर राजनीतिक तथा सामाजिक सेवामा सक्रियता देखाएका थिए । एचबीले सन् २०१७ मा बाल्टिमोर काउन्टी एसियन अमेरिकन अवार्ड पाएका थिए भने सन् २०१६ को अमेरिकाको प्रेसिडेन्टल इलेक्सनमा नेपाली फर हिलारी क्याम्पेन नै चलाएका थिए । डेमोक्रेट पार्टीबाट स्टेट डेलिगेट्स यात्रामा अघि बढेका उनीसँग सुरज भण्डारीले गरेको कुराकानी–
तपाईंको यहाँसम्मको यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न ?
म अमेरिकामा आएर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँ पनि आप्रवासीका थुप्रै समस्याहरु देखें । अमेरिकाको संविधान र कानुनले सबैलाई समान अवसर सिर्जना गराइदिएको छ । सबैलाई समान व्यवहारको सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर पनि हामी आप्रवासीहरुले त्यो अवसरलाई ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनौं, नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी यहाँ त्यो व्यवहारको सिकार भइरहेका छौं, जो हामीलाई सही लागिरहेको हुँदैन । अझ कुरा गर्दा आप्रवासीमध्ये पनि जनसंख्याको हिसाबले अल्पसंख्यकको अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ । यहाँको संविधान, कानुनले अल्पसंख्यकलाई अधिकार त दिएको छ, तर त्यो अधिकारको उपयोग गर्न यो समुदायले सकिरहेको छैन । अल्पसंख्यकमध्ये पनि हामी नेपालीको जनसंख्या त अझ न्यून रहेको छ । यो अवस्थामा हाम्रा पनि धेरै समस्या छन्, तर हामी त्यसलाई त्यो तहबाट सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामी अमेरिकामा छौं, अमेरिकी संविधान र कानुनअनुसार हामी यहाँ बढ्ने हो । हामीले हाम्रा समस्या पनि यहींकै संविधान र कानुनलाई टेकेर समाधान गर्ने हो । यसका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो समुदायको उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा हुनु जरुरी छ, जहाँ समस्याको सुनुवाइ हुन सक्दछ । अमेरिकामा बसिरहँदा हामी यहाँको मूलधारमा कसरी समाहित हुने हो त्यो चिन्तनमा लाग्नुपर्दछ । आज नहोला, भोलि नहोला तर लाग्दै जाँदा त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । आज हेर्नुहोस् भारतीय मूलकाको उपस्थिति कसरी अघि बढिरहेको छ, अहिले कुरा सुनाउने ठाउँमा, कुरा सुन्ने ठाउँमा भारतीयहरुको उपस्थिति रहेको छ । नेपाल हाम्रो जन्मघर हो भने अमेरिका हाम्रो कर्म घर हो, हामीले यहीं घरभित्रै रहेर हाम्रो जीवन, हाम्रो सन्ततीको जीवन सुखी राख्ने हो । त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्दछ ।
रह्यो मेरो यो राजनीतिक यात्राको कुरा म नेपालमा प्राध्यापन पेशा थिएँ । लाग्छ त्यो समयमा म कम उमेरको प्राध्यापकभित्र पर्दथें, सोही क्रममा अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेको जर्ज म्यासन युनिभर्सिटीमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न निम्तो आयो र म यहाँ आएँ । यहाँ आएर मैले फेरि स्नातकोत्तर गर्ने सोंच गरें, जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरें, अहिले युनिभर्सिटी अफ बाल्टिमोरबाट पीएचडी गरिरहेको छु । नेपालमा अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरी प्राध्यापन पेशामा थिएँ । नेपालमा रहँदा अधिकारका लागि विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेको थिएँ, तर मेरो राजनीतिक यात्रा भने अमेरिकामै अघि बढ्यो ।
अध्ययनकै क्रममा यहाँ बस्दा म आफू आप्रवासी, म जस्ता अन्य नेपाली र अन्य आप्रवासीले भोगिरहेका समस्या जो सूक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने थाहा हुन्छ । यहाँ सबै पाउन सकिन्छ तर प्राप्त गर्ने माध्यम नहुँदा अवसर प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था मैले देखें र बुझें । मलाई यसले लाग्नुपर्दछ भन्ने साहस दिलायो । तर, लाग्ने कसरी ? मेरो कुनै पूर्व तयारीले यहाँसम्मको यात्रा भएको होइन, म आफैं पनि आप्रवासी भएको नाताले मैले आप्रवासीको समस्या देखें, बुझें र के कारणले आप्रवासी अझ अल्पसंख्यक हामीहरुले अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनौं भनेर बुझ्दा मेरो बुझाइ के रह्यो भने दिने र सुन्ने तहमा हामी छैनौं अर्थात् हाम्रो उपस्थिति छैन भने हाम्रो कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र कसले सुनुवाइ गर्छ ? त्यसले मलाई ठूलो पाठ सिकायो ।
यसै क्रममा सन् २००८ को प्रेसिडेन्टल चुनावमा म बाराक ओबामाको पक्षमा खुलेर लागें, यो लाग्दाको अवधि अघि मैले डेमोक्रेटसँग अलि नजिक हुने मौका पाएको थिएँ । ओबामाले एउटा त्यो वर्णको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा मलाई उनीमा आप्रवासीको एउटा प्रतिनिधि पात्र लाग्यो, हुन त डेमोक्रेट आप्रवासीको मुद्दामा सधैं उदार रहँदै आएको छ । म ओबामाको प्रचारमा मेरिल्याण्ड मात्र होइन पेन्सिलभानिया, भजिर्नियासम्म पुगें । माइनोरिटी समुदायको व्यक्तिले चुनाव जितिरहँदा त्यसले एउटा अर्थ राख्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यो क्याम्पेनपछि भने मलाई डेमोक्रेट पार्टीमा लाग्न सहयोग पुग्यो, पार्टीको स्थानीय निकाय हुँदै पार्टीको योङ संगठन योङ डेमोक्रेट्स अफ अमेरिकाको राष्ट्रिय सचिव भएर पनि काम गरें, अहिले पनि पार्टीको विभिन्न तहमा रहँदै यो चुनावी यात्रामा अघि बढेको छु ।
ओबामाको चुनावी क्याम्पेनले तपाईंलाई राजनीतिमा तान्यो हैन ?
नेपालमा रहँदा पनि राजनीतिक चेतना थियो, अधिकार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान थियो । नेपालमै पनि विभिन्न समयमा भएका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनबारे म जानकार थिएँ । विश्व राजनीतिबारे पनि ज्ञान थियो । यसले मलाई बल पुग्यो, यहाँ जब म ओबामाको क्याम्पेनमा हिंडे, त्यो समयमा म यहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयमा पढाउने हुँदा थोरधेर चिना–परिचय पनि बढिसकेको थियो, तर जब म क्याम्पेनमा हिंडे त्यसलगत्तै हाम्रो क्षेत्रका सिनेटर क्याथी कुलज्मायर मेरो घरमा आउनुभयो । मलाई पार्टीमा लाग्नुहोस् भनेर उत्प्रेरणा दिनुभयो, मलाई पनि लाग्यो हाम्रो समुदायको समस्या बताउन, बुझाउन र अवसर सिर्जना गर्ने तहमा जान पनि यसले सहयोग पु¥याउँछ अनि म यसमा अगाडि बढें ।
तपाईं सन् २०१४ मा पनि लड्नुभएको थियो, पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनुभएको छ ?
त्यतिखेरको नतिजाले मलाई धेरै कुरा सिकायो । यहाँको चुनावी शैली र चुनावी अभियानबारे विस्तृत बुझ्न सकिएको थिएन । अनि मेरै पार्टीका केही साथीहरुको पनि सहयोग रहेन । खासगरी त्यतिखेरको संस्थापन पक्षको सहयोग रहेन तर अहिले सबैको साथ रहेको छ । मलाई पहिला असहयोग गर्ने अर्का उम्मेदवार साथी पनि म सँगै रहेर चुनाव लडिरहनुभएको छ । अहिले अवस्था निकै राम्रो छ, यो प्राइमेरी इलेक्सन जित्छु भन्ने छ र नोभेम्बर ६ मा हुने चुनावको तयारीमा लाग्नेछौं भन्नेमा म आशावादी छु ।
तपाईंको उम्मेदवारीलाई नेपाली समुदायसँग कसरी जोडेर हेर्नुभएको छ ?
हेर्नुहोस् मेरो उम्मेदवारीलाई मैले नेपालीलाई अमेरिकामा चिनाउने एउटा माध्यमको रुपमा लिएको छु । हामी सबैले आआफ्नो ठाउँ र आआफ्नो क्षेत्रबाट केही गर्न सक्दा नेपाली अमेरिकनको परिचय अझ फराकिलो बन्नेछ । म आज उम्मेदवार बनिराख्दा मलाई यहाँ मूलधारले ‘नेपालीज म्यान’ भनेर परिभाषित गरिराखेको छ, यहाँको पत्रपत्रिकाले मलाई इन्डोर्स गर्दा पनि त्यही हिसाबले गरिराखेको छ, म मात्रै होइन विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील साथीहरुले जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, त्यसले नेपालीलाई यहाँ चिनाउन मद्दत पुगेको छ । अहिले म उम्मेदवार भइरहेको डिष्ट्रिक्ट ८ मा हामीलाई नेपाली भनेर चिनिने सहयोग पुगेको छ भन्ने लाग्छ । म मात्रै होइन अब हामी जो जहाँ छौं जुन क्षेत्रमा छौं यहाँको मूलधारमा कसरी जोडिन सकिन्छ, त्यसमा लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । हाम्रो उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा बढ्न सक्दा हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुन थाल्नेछ, भविष्यमा अमेरिका भनेको अवसरको देश त हो तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यमको खाँचो पर्ने देश पनि हो, हाम्रो दोस्रो–तेस्रो पुस्ता यहाँ हुर्किरहेको छ, अब उनीहरुलाई अमेरिका नै उनीहरुको जन्म, कर्म घर हुनेछ । उनीहरुका लागि पनि हामीले बाटो बनाइदिनुपर्नेछ, त्यो बाटो त्यो ब्रिज बनाउने काममा म लागेको छु । मेरो यात्राले धेरै ठूलो उपलब्धि भए पनि नभए पनि जग बनाउने काममा म लागेको छ, म जस्तै अन्य साथीहरु पनि लागिरहनुभएको छ । सबैले मिलेर जाँदा त्यो सम्भव हुनेछ ।
अहिले माहौल राम्रो छ भन्नुभयो, कारण चाहिं के ?
मुख्यतः मैले त्यो लेभलको तयारी पनि गरेको छु । पार्टीभित्र पनि आफूलाई स्थापित गर्न सकेकै कारण उम्मेदवार बन्न सकेको छु । पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गरेको छु । पार्टीभित्र उम्मेदवार बनिरहँदा भिजन र पोलिसीमा डिबेट हुन्छ त्यसमा समेत मैले राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु । पछिल्लो पटक हिलारी क्लिन्टनको क्याम्पेनमा पनि म त्यो लेभलमा रहेर काम गर्न सकें । म एक्कासि आएर उम्मेदवार भएको होइन, पछिल्लो पटक नतिवा फेभरमा नआउँदा पनि मेरो सक्रियतामा कमी आएन । म पार्टीमा लागी नै रहें । आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहें, सामाजिक सेवामा पनि लागें । अहिले मैले जसरी आफूलाई अगाडि बढाएको छु, जुन हिसाबको सहयोग पाएको छु, यसले मलाई आशावादी बनाएको छ । मसँग बाल्टिमोर क्षेत्रबाट १८ वर्षदेखि सांसद रहिरहेका पनि सँगै रहेर हामी चुनावी अभियानमा लागेका छौं ।
अनि पार्टीबाट कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टी राजनीतिलाई पनि सँगै हिंडाएको छु । बाल्टिमोर काउन्टीबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य लड्ने तयारीमा रहेको छु ।
तपाईंले नाम परिवर्तन गर्नुभयो भनेर नेपालीहरुमा एक प्रकारको गुनासो पनि सुनिन्छ के भन्नुहुन्छ ?
होइन मैले नाम परिवर्तन गरेको छैन । अमेरिकामा जब म अध्ययनको क्रममा आएँ, यहाँ मलाई ह्यारी भनेर साथीभाइहरुले बोलाउन थाले । सबैले ह्यारी भन्न थाले, उनीहरुलाई यही भन्दा सजिलो हुने अनि बिस्तारै ह्यारी हुन गएको हो । बिस्तारै अधिकांशले ह्यारी भनिरहँदा र म यहींको मूलधारसँग जोडिन चाहिरहँदा उनीहरुलाई सजिलो लाग्छ भने के भयो र भन्ने मात्र हो । मेरो इन्डोर्समेन्टदेखि मेरो उम्मेदवारी हरेकसँग नेपाली अमेरिकन नै जोडिएको हुन्छ, यो गुनासो नपाल्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, म एचबी भण्डारी एउटा नेपाली अमेरिकन हुँ जो बिस्तारै यहाँको राजनीतिमा पाइला अगाडि बढाएको छ ।
तपाईंको यो अभियानमा नेपालीले के गर्न सक्छन् ?
मुख्य कुरा बाल्टिमोर र मेरो चुनावी क्षेत्रका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबाहरु जो मतदाता हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मत दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । यसका साथै स्वयंसेवक बनिदिएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । र, महत्वपूर्ण कुरा अमेरिकामा चुनाव निकै खर्चिलो हुन्छ, त्यसका लागि आर्थिक संकलनको काम भइरहेको छ, त्यसमा सहभागी भई मलाई सहयोग पु¥याउन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि म अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा बस्नुहुने नेपाली समुदायमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
हो, म आज मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरबाट उठिरहेको छु, मलाई अन्य राज्यबाट सहयोग गर्ने भन्ने पनि रहला, हामी भर्खर अगाडि बढेका छौं । हामीहरु एक हुन सक्दा मात्रै हाम्रो यात्रा अघि बढ्न सक्दछ । भोलि अन्य राज्यमा अरु कोही उठे पनि हामीले थोरधेर सहयोग गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा यसमा लाग्न उनीहरुलाई हौसला मिल्नेछ । सानो सहयोगले पनि भोलि ठूलो अर्थ राख्नेछ म सबैमा यही अनुरोध गर्न चाहन्छु । आज सानो सहयोगले तपाईं हामी कोही त्यो ठाउँमा पुग्न सके हाम्रो भ्वाइस बलियो हुनेछ म त्यसका लागि हात बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अमेरिकामा हाम्रो समुदायको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सन् १९९८ पनि अमेरिकामा नेपाली आउने क्रम बढेको देखिन्छ । विभिन्न माध्यमले अमेरिका आउनुभएका नेपालीहरु हुनुहुन्छ । यहाँ अध्ययन सकेको, यहीं हुर्किएको र यहीं जन्मिएर यहीं नै भविष्य देखिरहेको नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ । जसलाई अमेरिकाको बारेमा जति थाहा छ त्यति अन्यत्रको बारे थाहा छैन । त्यो जनसंख्यालाई अब हामीलाई यहाँ स्थापित जीवन दिलाउने बाटो खोजिदिनुपर्नेछ । हो, हामी नेपाली जहाँ बसौं हाम्रा सुख–दुःख बाँडिरहेका हुन्छौं । अब हामीले मूलधारमा कसरी समाहित हुने त्यो आधारसमेत बाँड्नुपर्नेछ । अमेरिकामा आएर पनि हामी गरिबीको रेखामुनि छौं । ४५ प्रतिशत नेपाली अमेरिकन अहिले गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । अहिले हामीले नसोच्ने हो भने यो अवस्था बढ्नेछ । अर्कोतर्फ यहीं हुर्किएको पुस्ताका लागि हामीले अमेरिका अवसरको देशको भनेर पुष्टि गर्न नसक्ने हो भने उनीहरुमा फ्रस्टेशन पनि बढ्नेछ, त्यसका लागि हामीहरु जो जहाँ छौं, त्यहींबाट हाम्रो समुदायलाई मूलधारमा जोड्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्नेछ ।
र, रह्यो कुरा हामी जो जहाँबाट यसमा लागेका छौं, उनीहरुलाई हौसला, साथ र सहयोग गर्नुपर्नेछ । दुःख लाग्छ कहिलेकाहीं घटना घटेपछि हामी गो फन्ड मी मार्फत पैसा संकलन गर्छौं तर हामी यो कुरामा चिन्तन गर्दैनौं कि यदि हाम्रा प्रतिनिधि त्यो सरकारी निकायमा पुग्न सक्दा त्यो सरकारले गर्न सक्नेछ, र त्यो बनाउन सक्छौं भन्ने यहाँ जान्दा, बुझ्दा र आफ्नो उपस्थिति हुँदा अहिले हामीले विभिन्न माध्यमबाट गरेको कार्य यही सरकारी निकायबाटै पनि गराउन सक्छौं, त्यसतर्फ सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
म सबैमा आग्रह यही गर्छु कि हामी अब यहाँको मूलधारमा जोडिन प्रयत्न गरौं । ठूलो–सानो, स्थानीय होस् या केन्द्र जहाँ सकिन्छ त्यो तहमा बसेर काम गर्न थालौं बिस्तारै हाम्रो उपस्थिति यो तहमा पनि बढेर जानेछ । हामी आप्रवासीका धेरै समस्या छन् । हामीमा सामाजिक विविधता छ, हामी जसरी एक छौं अब हामी हाम्रो अबको पुस्तालाई बाटो निर्माण गराइदिने अभियानमा लागौं । पार्टीगत कुरा डेमोक्रेट पार्टी आप्रवासीप्रति निकै उदार छ, यसका नीति आप्रवासीको हितमा छन् । त्यसैले म यसमा लागेको छु । तर, म यो पनि भन्दिन कि सधैं रिपब्लिकनले जित्ने टेक्सस लगायतका केही ठाउँमा रिपब्लिकनबाट उठ्दा पनि हाम्रो समुदायलाई त्यसले हित गर्नेछ । जे जसरी हुन्छ अब हामी यहाँको विभिन्न तहमा पुग्नुछ, मिलेर नेपाली समुदायको उत्थानमा लाग्नुछ, नेपाली अमेरिकनको परिचयलाई अझ फराकिलो पार्नुछ । म लगायत केहीले जग बनाउन लागेका छौं, बलियो जग बनाउन केही वर्ष लागे पनि हामी थाक्ने छैनौं । बाँकी घर बनाउने काम अबको पुस्ताले गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।